कम्मर दुखेमा के गर्ने ? | ''Knowledge Never Ends''
डा. अरुणा उप्रेती – जीवनमा एक न एकपटक ढाड नदुखेका मानिस प्रायः कमै हुन्छन् ।
केहि नभएको व्यक्तिलाई पनि एक्कासी निहुरिंदा वा केहि काम गर्दा चसक्क भए जस्तो हुने र त्यसपछि ढाडको दुखाइ सुरु हुन्छ । ढाड दुख्ने व्यक्तिहरू सुरुको अनुभव यसरी नै सुनाउँछन् ।
हाम्रो जीवनशैली, उठाइ/बसाइको तरीका, कम्प्युटर तथा अन्य मेसीनको सञ्चालन, शरीरको तौल आदि विभिन्न कारणले ढाडमा असर पार्छ ।
एक्कासी ढाड दुखेको पीडा कहिल्यै बिर्सन सकिँदैन । ढाड एक्कासी दुख्नेबाहेक अलि–अलि गर्दै लामो समयसम्म दुख्ने पनि हुन्छ । यसरी अलि–अलिको दुखाइले हामीलाई पछि हुन सक्ने कठोर दुखाइको संकेत दिइरहेको हुन्छ । तर, कतिपय व्यक्तिहरू ढाड दुख्दादुख्दै पनि हिंडिरहेका हुन्छन् र पछि अचानक थला पर्छन् ।
ढाड दुखाइको मतलब हो, मांसपेशीहरू थकित हुनु । मांसपेशीहरूलाई आराम नपुग्नु । यस्तो बेला विशेष गरी एक्कासी हुने दुखाइमा सबैभन्दा ठुलो उपचार हो, आराम । धेरैजसो अवस्थामा त वास्तवमा आराम मात्रै एउटा औषधि हुन सक्छ र दुखाइबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
एक–दुई दिन पूर्ण आराम गर्नु उत्तम हुन्छ । सात आठ दिनसम्म हलचल नगरी ओछ्यानमा सुत्न आवश्यक पर्दैन । विभिन्न अनुसन्धानले के देखाएको छ भने दुई-तीन दिन आराम गरेपछि दुखाइ केहि कम हुन्छ र हिंडडुल र साधारण काम गर्नु उचित हुन्छ । तर, दुई–तीन दिनमै दुखाइ पूर्णरूपमा हराउन चाहिं हराउँदैन । पूर्णरूपमा दुखाइ ठीक हुन छ हप्ता जति लाग्न सक्छ ।
ढाड दुख्दा ज्वरो आउने, पेट दुख्ने, छाती दुख्ने र सास फेर्न गाह्रो भएमा ।
ढाड दुखेपछि आराम गर्दा पनि दुखाइ ठिक नभएमा
औषधि खाएर पनि ढाडको दुखाइ ठीक नभएमा
ढाड दुख्दादुख्दै खुट्टा र घुँडामा पनि दुख्न थालेमा ।
कहिलेकाहीँ मूत्रनलीको सङ्क्रमण वा मृगौलाको समस्या हुँदा पनि ढाड दुखेजस्तो हुनसक्छ ।
एक्कासी भएका ढाड दुखाइमा चिसो राख्दा केहि सञ्चो हुन्छ । बरफका टुक्रालाई सुती कपडामा पोको पारेर बिस्तारै दुखेको ठाउँमा ७/८ मिनेटसम्म मालिस गर्नुपर्छ ।
यसले मासंपेशीमा भएको तनाव केहि हट्छ । यो एक/दुई दिन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि तातो पानीको सेकाइ राम्रो हुन्छ । तातोले सेक्नु पर्दा बोतलमा तातोपानी राखेर पनि सेक्न सकिन्छ । कुनै बाक्लो सुतीको कपडालाई तातो पानीमा भिजाएर निचोरेपछि ढाडमा राखेर केहि बेर थिच्नाले पनि मासंपेशीको तनाव कम हुन्छ ।
दुखाइ केहि कम भएपछि साधारण व्यायाम गर्नु उचित हुन्छ । जस्तो कुनै ठाउँमा बसेर घुँडालाई आफूतिर खुम्च्याउने र पुनः तन्काउने । यसो गर्दा मासंपेशीमा तनाव कम हुन जान्छ । व्यायाम दैनिक रूपमा गर्नुपर्छ ।
दुखाइ कम गर्ने औषधि प्रयोग गर्दा दुखाइ कम हुनुको साथै सुन्निने प्रक्रिया पनि कम हुन्छ जसले गर्दा दुखाइ छिटो ठीक हुन्छ । तर, पेटमा घाउ भएका व्यक्तिहरूले डाक्टरको सल्लाह अनुसार यस्ता औषधि लिनु ठीक हुन्छ । दुखाइ कम गर्ने धेरै जसो औषधिहरू प्रायः केहि खाना खाएपछि खानुपर्ने हुन्छ ।
(डा. उप्रेतीको पुस्तक “आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा” बाट)
← Watch New Hindi film – “Satya 2”
Hindi Film ” Gori Tere Pyaar Mein” (2013) Watch Online →